Madaxweyne Gaas oo sagootiyay madaxii Hay’adda UNFPA Puntland Oo Bakistan loo badaley. | puntlandi.com
Madaxweyne Gaas oo sagootiyay madaxii Hay’adda UNFPA Puntland Oo Bakistan loo badaley.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo taariikhdu tahay 04 july 2018 waxaa uu xafiiskiisa ku sagootiyey madaxa UNFPA Puntland mudane Bakhtior Kadirov, kadib markii loo bedaley dalka Bakistan.
Hay’adda UNPFA ayaa Puntland shaqoyin baaxad leh ka fulisa sida, daryeelka Hooyada iyo dhalaanka, taageerada Hospitalada shaybaarka DNA iyo shaqooyin kaloo farabadan oo muhiim ah.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Hay’adda UNFPA iyo mudane Bakhtior Kadirov ku ammaanay ugana mahad celiyay Shaqada wanaagsan ee ay dalka ka fuliyeen intii uu xafiiska UNFPA madaxda ka ahaa Mudane Bakhtior, isla mar’ahaantaana madaxwaynayaa ayaa sheegay inuu u rajaynayo masuulkan xafiiska baneeyey mustaqbal wanagsan.
Sidoo kale Madaxa Hay’ada UNFPA Puntland Bakhtior Kadirov ayaa Dawladda Puntland uga mahad celiyey sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyey Puntland intii uu ku sugnaana, sidoo kalena sheegay in wada shaqayn wanaagsan uu lalahaa madaxda Dawladda Puntlnad iyo shacabkeeda.
Ugu danbayn, Madaxweynha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shahaado sharaf gudoonsiiyey marwo Baxsan Siciid oo ka mid ah hawlwadeenada xafiiska UNFPA iyo Madaxa Hay’ada UNPFA mudane Bakhtior Kadirov oo soo gebagebeeyey xili hawleedkiisii uu ku Joogay Puntlnad.